Barnaamijyada Kubadda ee Burnsville - I Got Skills Minnesota
Akadeemiyada Xirfadaha Kubadda Cagta
Xerooyinka soo socda
Xerada Maalinta Nofeembar
Rugta Xirfadaha Xirfadaha-Hore
Weeraryahan Black Friday + Rugta Caafimaad
Xirfadaha I Got wuxuu iskaashi la yeeshay 191 Community Ed si ay ugu fidiso barnaamijyada kubada cagta dugsiga ka hor dhammaan 10ka dugsi ee Degmooyinka. Waxaan mideyneynaa bulshooyinka isla markaana waxaan ku abuurnay kalsooni iyadoo loo marayo isboortiga adduunka. Clin Xarumaha Xirfadaha Kubadda Cagta ee Got Skills waxay bixiyaan jawi xiiso leh oo habaysan laakiin halkaas ciyaartooygu ay bilaabayaan inay wanaajiyaan barashada iyo horumarinta xirfadooda kubada cagta. Ku shaqee xawaaraha iyo tababarka xawaaraha si aad u noqoto mid sii xoog badan, dhakhso badan oo jilicsan. Ciyaartoy kasta waxaa lagu riixay inuu hagaajiyo farsamada iyo xawaaraha, isagoo ka shaqeynaya lugaynta iyo kubbadda cagta. Jimicsiyada jimicsiga waxay adeegsadaan dhammaan qeybaha cagaha oo ay ku jiraan suulasha, gudaha, bannaanka, suulasha, ciribta iyo ciribta. Waxaad heli doontaa aaladda aad ubaahantahay inaad khiyaameyso kuwa kaa soo hor jeeda isla markaana aad u dhaqaaqdo difaacayaasha hore. Markii aad horumariso xirfadahaaga kubada cagta, waxaad ku horumarin doontaa kalsooni heer sare ah kubada iyo ciyaartoy ahaan. Ku kulan jimicsiga.
* Xiro dhar ciyaar dibadda ah.
Jir ahaan - Maalin kasta ciyaartoydeena waxay ku bilaaban doonaan xawaareynta xawaaraha iyo Awooda madaama ciyaartoydu ay sii xoogaystaan, dhaqso badan yihiin, oo ay ka sii dhib badan yihiin.
Farsamo - Hubinta in ciyaartoy kasta lagu riixo inuu hagaajiyo farsamada iyo xawaaraha, waxaan ka shaqeynaa Cilmiga Kubbadda Cagta iyo Kubadda Masraxa. Jimicsiyada jimicsiga waxay isticmaalaan dhammaan qeybaha cagta oo ay ku jiraan suulasha, gudaha, bannaanka, suulasha, ciribta, iyo cagaha.
Maskaxda - Anagoo adeegsanayna cayaaraha iyo khiyaanooyinka waxaan u tartameynaa kuna dhiirigelineynaa ciyaartoydu inay gaaraan go'aano wanaagsan oo ku saleysan xaalada la siiyay. Bar iyaga inaan kaliya arag waxa hadda dhacaya laakiin inay xakameeyaan oo ay saadaaliyaan waxa dhici doona.
Dhaq dhaqaaq - Awoodda kaliya ee ugu muhiimsan kubada cagta waa awooda inaad ka gudubto koox ka soo horjeedda, maahan inaad ku gudubto, laakiin inaad toos uhesho ciyaaryahan kale. Waxaan siinaa ciyaartoydeena aaladda ay ugu baahan yihiin inay ku khiyaaneeyaan kuwa ka soo horjeed oo ay ku helaan difaacyo hore.
Kalsoonida - Ciyaartoygu had iyo jeer wuxuu u shaqeeyaa si ka sii wanaagsan markay kalsooni qabaan. Waxaan ka caawinaa ciyaartoydeena inay bartaan inay maskax ahaan is dayaan si ay diirada u saaraan waxa ay iskudayaan inay sameeyaan, halkii ay ka walwalaan inay qalad sameeyaan